अभिनत्री शिल्पासँग छवि ओझाले सुटुक्क बिहे गरेको रहस्य खुल्यो, सम्बन्ध स्विकार्दै लेखे यस्तो स्टाटस - Nepal Insider
Home/समाचार/अभिनत्री शिल्पासँग छवि ओझाले सुटुक्क बिहे गरेको रहस्य खुल्यो, सम्बन्ध स्विकार्दै लेखे यस्तो स्टाटस
अभिनत्री शिल्पासँग छवि ओझाले सुटुक्क बिहे गरेको रहस्य खुल्यो, सम्बन्ध स्विकार्दै लेखे यस्तो स्टाटस
श्रीमान–श्रीमती स्वीकारेर बसे पनि लामो समयसम्म निर्माता छविराज ओझा र अभिनत्री शिल्पा पोखरेलले आफ्नो सम्बन्ध लुकाएर दर्शकलाई मुर्ख बनाइरहे । अभिनेत्री रेखा थापासँग डिभोर्स भएपछि छविले शिल्पालाई फिल्म क्षेत्रमा ल्याएर अगाडि बढाए । र आफैले दुवै नजिक भएको सूचना चुहाए । फिल्म क्षेत्रका अधिकांश दुवैको सम्बन्धको बारेमा जानकार थिए, तर सँधै प्रेमी–प्रेमीकाको रुपमा मात्रै परिचय दिए ।
सुटुक्क आफन्तहरु बोलाएर विवाह गरे । कन्यादान दिने ब्यक्तिको नाम खुल्यो । तापनि विवाहबारे सोच्दैछौं भनेर मुर्ख बनाउने प्रयास गरिरहे । ओझाकी पूर्वपत्नी थापाले आफ्नो डिभोर्स भइसकेको र शिल्पासँग विवाह गरिसकेको ब्यक्तिसँग आफ्नो नाम नजोड्न सार्वजनिक रुपमै आग्रह गरिन् साञ्चारकर्मीलाई । तापनि ओझा दम्पतीले स्वीकारेनन् ।
दुवै आफ्नो सम्बन्धबारे नबोलेको भए चासो नै हुदैनथ्यो । विवाह गरेर पनि विवाह गर्ने सोचमा रहेको छ भन्दै डाँटिरहेपछि एक वर्षअघि दुवैको विवाहको फेहरिस्ता खोलिएपछि विवाहबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्न छोडेका थिए । सत्य कतिदिन लुक्न सक्थ्यो र ? आखिर ओझा आफैले सामाजिक सञ्जालमा शिल्पासँगको तस्वीर राखेर सम्बन्ध स्वीकार्दै अंग्रेजीमा लेखे, ‘मेरो जीन्दगीको सुरुवात तिमीसँगै हुन्छ । र म चाहन्छु यसको अन्त्य पनि तिमीसँगै होस् । कोही यो कुरामा केही भन्न चाहन्छ भने अब म त्यो कुरा सुन्ने पक्षमा छैन ।’
ठीकै छ त, ढिलै भएपनि स्वीकार्नु राम्रो हो । -शुक्रबार साप्ताहिकबाट ।
भारतले बनाइदिएको धर्मशाला तीन तारे होटल चलाउन व्यापारीलाई हस्तान्तरण
राजीव जैनको फोटोग्राफी मेमोरी
आज विश्वकै अद्भूत क्षमताका राजनीतिज्ञ मदन भण्डारीको जन्मदिन
स्काभेटरको सहायताले पुरिएका बालक खोज्दै (तस्वीर)
बिधा भण्डारी यो देशको रास्ट्रपति त के रत्नपार्कमा बसेर डालोमा बदाम बेच्ने जति नि औकात छैन : ज्वाला सङ्ग्रौला….(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण)